ဤရွေ့ကား 2020 ၏ INSTAGRAM ကိုအကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံ 10 - သတင်း
Kylie Jenner မှ Ronaldo သို့ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း Instagram တွင်အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံ ၁၀ ခုရှိသည်
ဒီငရဲနှစ်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရအောင်၊ ကျွန်တော်တို့အလွန်လိုအပ်နေသော escapism ကိုပေးတဲ့ Instagram လိုမျိုးဒီဟာကနေဖယ်ထုတ်လို့ရတဲ့အနည်းဆုံးတော့အနည်းငယ်သောအရာများရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်များခဲ့ကြပြီးယခုအချိန်တွင်နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အနှစ်သက်ဆုံး Instagram ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ Kylie Jenner-fest လား၊ အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်တွင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးများ၏ဓာတ်ပုံများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်နှစ် ဦး စလုံးအရောအနှော။ မျိုး။ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဥ (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖော်ပြသည်) ကဲ့သို့သောအကောင့်များကသက်သေပြထားသည့်အတိုင်းဤစာရင်းသည်သမိုင်းတွင်ဤအချိန်ကာလအထိအကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သည် - ထို့ကြောင့်၊ လူကြိုက်အများဆုံး Instagram ကိုကြည့်ရအောင်။ 2020 ၏ဓါတ်ပုံများ။
10. Lebron ဂျိမ်းစ်
LeBron James (@kingjames) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
နံပါတ် ၁၀ မှာ Lebron James ဖြစ်ပြီးဒီနှစ်အစောပိုင်းကသူ့ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်သေဆုံးမှုပြီးနောက်ကိုဘေးဘရိုင်ယန်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ Lebron သည် Bryant ၏အသင်းဖော်ဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအကြိမ်ပေါင်း ၁၅.၅ သန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်သောကြောင့်သူသည်နှလုံးကြေကွဲခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
ငါ့နှလုံး Vanessa နှင့်ကလေးတွေသွားတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏အမွေလူကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်သင်ကတိ! သငျသညျအထူးသဖြင့်ဤနေရာတွင်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤမျှလောက်ဆိုလိုတာက #LakerNation ထိုသို့ငါ့အကျောပေါ်မှာဒီ shit ထားနှင့်သွားစောင့်ရှောက်ရန်ငါ့တာဝန်ပဲ !! ငါ့ကိုကောင်းကင်မှခွန်အားပေးပါ။
အဘယ်သူသည် matilda အတွက် trunchbull ကစား
tentree (@tentree) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
လူကြိုက်များသောတင်ပို့ချက် ၁၀ ခုတွင်လူများအားပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုသတိပြုမိရန်ပြောရန်ရောင်စုံကာတွန်းမပါဘဲ Instagram သည်မဖြစ်နိူင်ပါလား။ နံပါတ် ၉ နေရာကိုယူခြင်းသည် Tentree ဖြစ်ပြီးသစ်ပင် ၅၀၀,၀၀၀ ကိုအကြိုက် ၅ သန်းအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ကတစ်သန်းကိုအကြိုက် ၂၀ သန်းအတွက်လဲလှယ်သည်။ (လက်ရှိ ၁၅.၅ သန်းအကြိုက်တွင်မရသေးပါ) ။
On သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် , သူတို့သည်ယနေ့အထိသစ်ပင်သန်း ၅၀ စိုက်ပျိုးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ပို့စ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေသစ်ပင်များကိုစိုက်ပြီးပြီဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ဂုဏ်ယူစရာပင်။
ကိုလီ🤍 (@kyliejenner) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Jenner သည်ဤစာရင်းတွင်မည်ကဲ့သို့ပါဝင်မည်မဟုတ်သနည်း။ ထို့အပြင် Jenner မှကလေးတစ် ဦး သည်မည်ကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်သနည်း။ အထက်ပါ post သည်ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သောသူမ၏သမီး Stormi ထံအပ်နှံထားသောဓာတ်ပုံများစုစည်းခြင်းဖြစ်သည်။
စာတန်းထိုး - ဒီနှစ်ဖေဖေမွေးနေ့ကိုပျော်လိုက်တာ! ငါမုန်တိုင်းတစ်ဖေဖေရဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံဖို့စတင်ဖြည်းဖြည်းပေမယ့်သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ကျနော်တို့ကြီးမြတ်အပေါ်တစ်ဝက်သွားလေ၏!
ဒီ post နီးပါး 16 သန်းအကြိုက်ရှိပါတယ်။
လီယိုမက်ဆီ (@leomessi) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ယခုနှစ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖုံးလွှမ်းထားသောနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်သေခြင်းသည် Maradonna's ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ Lionel Messi သည်အကြိမ် ၁၆ သန်းကျော်အကြားတွင်ရရှိခဲ့သောဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုအတူတူမျှဝေခဲ့သည်။
6. ဂျနီဖာ Aniston
ဂျနီဖာအနစ္စတန် (@jenniferaniston) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Instagram ပေါ်တွင်ဂျနီဖာအနစ္စတန်၏ပထမဆုံးသောရာထူးမှာသူ (၅) နာရီနှင့် (၁၆) မိနစ်အကြာ၌နောက်လိုက်တစ်သန်းကျော်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင်တင်ထားသောသူမ၏သူငယ်ချင်းများဝတ်စုံများနှင့်သူမ၏ဓာတ်ပုံသည်အကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် ၁၆.၃ သန်းမျှရှိသည်။
ကိုလီ @ (@kyliejenner) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ကြည့်ရှုပါ၊ နောက်တစ်ခါ Kylie Jenner နှင့်သူမ၏သမီး Stormi ၏မွေးဖွားခြင်းကိုကြေငြာခြင်းဖြင့်ဤအချိန်ပင်! ဤ post သည် Kylie ၏ကိုယ်ဝန်ကိုလျှို့ဝှက်ထားသည့်ဤဓာတ်ပုံမတင်မချင်းအထိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိဖြစ်သည်။
အကြိမ် ၁၈.၅ သန်းအကြားမှာရယ်စရာကောင်းပေမယ့်လူအများစုဒီလောက်စုစည်းမိကြတာပါ။
Chadwick Boseman (@chadwickboseman) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
လူကြိုက်များသောကိန်းဂဏန်းဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနောက် Instagram တစ်ခုသည် (ယခုနှစ်တွင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်မဟုတ်လော) သူကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် Chadwick Boseman ၏ Instagram စာမျက်နှာတွင်ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။ Chadwick သည်သူ၏ကင်ဆာရောဂါကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ကွယ်လွန်ခြင်းမပြုမီ ၄ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ post ကို 19 သန်းကျော်အကြိုက်ရှိပါတယ်။
3. Cristiano ရော်နယ်ဒို
Cristiano ရော်နယ်ဒို (@cristiano) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
နံပါတ် (၃) မှာဒီ post ကကြိုက်နှစ်သက်ရာသန်း ၂၀ နီးပါးရှိတဲ့ဒီဓာတ်ပုံကို Cristiano Ronaldo ကနေထပ်မံညည်းတွားနေပါတယ်။ ဘာသာပြန်ထားသောစာတန်းကဖတ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အားနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာသည်ထာဝရပါရမီရှင်အားနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ။ တစ် ဦး မတူနိုင်တဲ့ Magician ။ သူကသိပ်မကြာမီထွက်ခွာသွားပေမယ့်အမွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဘဲထားခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေလော့။ သင့်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။
MAKE OUT HILL (@xxxtentacion) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
နံပါတ်နှစ်အစက်အပြောက်မှာသူမသေဆုံးမီ XXXTentacion ၏ပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးရာထူးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလတွင်တင်ခဲ့သောအကြိမ်သည် ၂၂.၆ သန်းဖြင့်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
ယူဂျင်းမှမျှဝေသောပို့စ် #EggGang (@world_record_egg)
နောက်ဆုံးတော့နံပါတ်တစ်မှာ Aaaand - မင်းထင်ခဲ့တာပဲ! ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့စံချိန်ရှိသည့်ဥဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤသည်နေဆဲအရာသည်ငါ့ထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ် (နှင့်လူအများစု), ဒါပေမယ့်သန်းပေါင်း 30 သန်းမှာအပြတ်အသတ်အကြိုက် 54.5 သန်းမှာယှဉ်ပြိုင်မှုမှာမှာ, surelyကန်အမှန်ဘယ်နေရာမှာသွားမထင်ထားဘူး။
•အဆင့် - ဤသည်များသည် A များဆုံးအကြိုက်ဆုံး TikTok ဗီဒီယို ၁၇ ခုဖြစ်သည်
•အဆင့် - A ချိန်များ A ားလုံးတွင် A များဆုံးကြည့်ရှုသူ ၂၁ ယောက်ဖြစ်သည်
•အဆင့် - ဒီဟာ Instagram ရဲ့ထိပ်ဆုံးအကောင့် ၂၀ ဖြစ်ပြီးနောက်လိုက်များအများဆုံးပါ